Erifazi anotanga kutaura (1-21)
Anoshora kuperera kwaJobho (7, 8)
Anotaura mashoko aakaudzwa nemweya (12-17)
‘Mwari haatendi muvashumiri vake’ (18)
4 Erifazi+ muTemani akabva apindura achiti: 2 “Kana mumwe munhu akaedza kutaura newe, ungatadza kumumirira kusvika apedza here? Nekuti ndiani angaramba akanyarara asingatauri? 3 Iwe pachako waidzidzisa vanhu vazhinji,Uye waiwanzosimbisa maoko asina simba. 4 Mashoko ako aisimudza munhu wese anenge agumburwa,Uye waisimbisa vaya vaiva nemabvi aipera simba. 5 Asi iye zvino zvaitika pauri, iwe wava kupera simba;Zvakubata, uye wava kunetseka. 6 Kutya kwako Mwari hakuiti kuti uve nechivimbo here? Kurarama kwako wakaperera kwaari+ hakukupi tariro here? 7 Chimbofunga izvi: Munhu upi asina mhosva akamboparara? Munhu akarurama akamboparadzwa riini? 8 Zvandakaona ndezvekuti vaya vanorima* zvakaipaUye vaya vanodyara matambudziko vachakohwa izvozvo. 9 Vanoparadzwa nekufema kwaMwari,Uye vanoparara nekuputika kwehasha dzake. 10 Shumba inodzvova, uye shumba ine simba inohon’a,Asi kunyange mazino eshumba dzakasimba* anoguka. 11 Shumba inoparara nekushaya mhuka yekubata,Uye vana veshumba vanopararira. 12 Zvino shoko rakaunzwa kwandiri pachivande,Uye nzeve yangu yakarinzwa nezevezeve. 13 Ndichinetseka mupfungwa muzviratidzo zveusiku,Vanhu pavanenge vakafa nehope, 14 Kudedera kunotyisa kwakauya pandiri,Kukazadza mapfupa angu ese nekutya. 15 Mweya* wakapfuura nepachiso changu;Mvere dzenyama yangu dzakasimuka. 16 Wakabva wamira,Asi handina kuziva kuti wakanga wakaita sei. Chimwe chinhu chakanga chiri pamberi pemaziso angu;Pakava nerunyararo, ndikabva ndanzwa inzwi richiti: 17 ‘Munhu anofawo zvake angava akarurama kupfuura Mwari here? Munhu angava akachena kupfuura Muiti wake here?’ 18 Iye haatendi muvashumiri vake,Uye anowanira ngirozi dzake* mhosva. 19 Ko kuzoti vaya vanogara mudzimba dzevhu,Dzine faundesheni iri muguruva,+Vanotswanywa nyore nyore sechitemamachira!* 20 Vanoparadzwa zvachose kubvira mangwanani kusvikira manheru;Vanoparara nekusingaperi, uye hapana anombozvicherechedza. 21 Havana here kufanana netende rabviswa tambo? Vanofa vasina uchenjeri.
^ Kana kuti “vanoronga.”
^ Kana kuti “eshumba dzava nezenze.”
^ Kana kuti “vatumwa vake.”